यि हुन् आफ्नो श्रीमानलाई परस्त्रीसगँ सल्कनबाट जोगाउने तीन उपायहरु - Arghakhanchi Saptahik
Home Slider मनोरंजन यि हुन् आफ्नो श्रीमानलाई परस्त्रीसगँ सल्कनबाट जोगाउने तीन उपायहरु
यि हुन् आफ्नो श्रीमानलाई परस्त्रीसगँ सल्कनबाट जोगाउने तीन उपायहरु
एजेन्सी । कामोत्तेजनाका बारेमा तपाइ हामीबिच धेरै कुरा हुने गर्दछ । पुरुषहरु महिलाको तुलनामा चाडै उत्तेजनामा आउने गर्दछन् । ।महिलाले आफ्नो पुरुष साथीलाई कसरी खुशी पार्न सक्छन् त ? हामी यसको बारेमा कुरा गर्दैछौँ । जसको बारेमा तपाईलाई थाहा नभएर पश्चगमन भइरहेको हुन सक्छ । तपाईको यौन जीवन अवनतितिर गइरहेको हुन सक्छ । हामी त्यसको बारेमा कुरा गरिरहेका छौ, जसले तपाईको यौन जीवनलाई नकारात्मक असर गरिरहेको छ ।
आफनो पुरुष साथीको प्रबल कामोतापको बारेमा जानकारी छैन भने वा पुरुष साथीले कतिखेर कुन समयमा कसरी प्रबल कामानन्द प्राप्त गर्छन् भन्ने जानकारी छैन भने तपाईको यौन जीवनलाई अवश्य पनि केही नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको हुन सक्छ ।
महिला साथीहरु, तपाईले आफनो बराबरीको पार्टनरसीप खोजिरहनुभएको छ भने पुरुष साथीको यौनाङ्गको बारेमा जानिराख्दा उत्तम हुन्छ । यदि त्यस क्षण तपाईको पुरुष साथीलाई कागतीको रस जस्तो निचोडि रहेको छ भने अझ यो कुरा अझ फलदायी हुनेछ ।
साथीहरु, आज तपाईहरु धेरैभन्दा धेरै कामहरु गर्नुहोस जसले तपाई र तपाईको पुरुषसाथीलाई उत्तेजित गर्न सघाउने छ, तपाईलाई यौनसर्ंर्सगमा बढी आनन्द दिन सघाउने छन् । तपाईको अनुहारमा खुशीका रेखाहरु देखाउने गरि कामहरु गनुहोस् । यी तल दिइएको उपायहरु व्यवहारिक र सजिलो पनि छ ।
१. स्खलनको मुख्य ट्रिगर विन्दु हो, यो क्षेत्र लिगंको टुप्पोतिर हुन्छ । बिज्ञहरुका अनुसार यही ठाउँमा धेरै यौनिक नसाहरुको केन्द्र रहेको हुन्छ ।
२.जब तपाईको पुरुष साथीले वीर्य निकाल्छन्, स्खलन हुन्छ तब उसको ६ देखि १० गुणा बढी बलियो र कडा भएको यौनाङ्ग संकुचन हुन थाल्छ । र प्रोस्टेट ग्रन्थिहरुमा संवेदनशीलता भरिरहेको हुन्छ ।
महिलाहरु साथीहरु, आफनो पुरुष साथीको अण्डग्रन्थिहरुको पछाडीमा र परितन्त्रिकाहरुमा आफनो औँलाहरुहरुले हल्कासँग थिच्नुहोस् । किनकी यो पुरुषहरुलाई आनन्द दिने सर्वोत्तम ठाउँ हो ।
३. कामोताप, प्रबल कामोत्तना दिमागमा हुन्छ । स्खलन त को प्रतिविम्ब मात्र हो । यो स्खलन त अभिव्यक्ति मात्र गर्ने गर्छ । केही पुरुषहरुमा प्रबल कामोत्तना पहिलो स्खलन संकुचन हुनुभन्दा पहिले अनुभूत हुन्छ भने अधिकांश पुरुषहरुमा स्खलन संकुचन पश्चात प्रबल उत्तेजना, उन्माद को अनुभूति हुन्छ ।